Madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee dowladda federaalka Soomaliya oo u safray Addis Ababa si uu uga qeybgalo shir madaxeedka Afrika - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee dowladda federaalka Soomaliya oo u safray Addis Ababa si uu uga qeybgalo shir madaxeedka Afrika
January 30, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee dowladda federaalka Soomaliya, Xasan Shiikh Maxamuud, ayaa maanta oo Isniin ah u safray magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya.
Xasan Shiikh ayaa halkaas uga qaybgali doona shir madaxeedka Afrika oo la filayo in maanta uu ka furmo xarunta Midowga Afrika ee gudaha Addis Ababa.
Sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay xafiiska madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday, inta uu halkaas joogo waxaa la filayaa in uu kulamo gaar ah la yeelan doono qaar kamid hoggaamiyaasha shirka ka qaybgali doona.
December 9, 2016 Xasan Shiikh oo u safray Addis Ababa si uu uga qeybgalo shirka IGAD